Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda oo ku Shiray Nairobi | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda oo ku Shiray Nairobi
Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda oo ku Shiray Nairobi
Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda ayaa lagu waddaa in xubno ka socda Beesha caalamka ay kula shiraan Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya.
Xubno ka tirsan Beesha Caalamka ayaa la kulmay Qaar ka mid ah Madaxda maamul goboleedyadda oo hada ku sugan Magaalada Nairobi.
Waxaa lagu waddaa in uu ka furmo Magaalada Nairobi kulan Ballaaran oo ay ka qeyb galayaan inta badan Madaxda maamul goboleedyadda,kaasoo looga hadlaayo sidii loo soo Afjari lahaa Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Xubin ka mid ah Guddiga fulinta Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda ayaa Radio baidoa u xaqiijiyay in ay sidoo kale dhaceen kulamo dhexmaray Madaxda maamul goboleedyadda ee hadda ku sugan Kenya, Sidda Madaxweynaha Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Xaaf ayaa la sheegay in uu kulankaasi kaga qeyb galay Khadka Taleefanka.
Qodobadda looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah Sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta maamul goboleedyadda, Dadaallada Aqalka Sare iyo Beesha Caalamka.